Dowlada Federalka ayaa ku eedeysay maamulada Puntland iyo Jubbaland inay soo hordhigeen shuruudo aan la aqbali karin. | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Dowlada Federalka ayaa ku eedeysay maamulada Puntland iyo Jubbaland inay soo hordhigeen...
Dowlada Federalka ayaa ku eedeysay maamulada Puntland iyo Jubbaland inay soo hordhigeen shuruudo aan la aqbali karin.
Qoraal lagu shaaciyay warbaahinta dowlada ayaa u qornaa sidan;
“Sida aad lawada socotaan bishii 7-aad ee Sannadkii hore ee 2020-kii waxa soo bilaabmay doodda ku saabsan Nooca Doorashada Soomaaliya ee 2020/2021-ka. Dowladda Federalka Soomaaliya oo rabtay in ay dalka u hoggaamiso barnaamijka xisbiyada badan ayaa waxa qaar ka mid ah Maamul Goboleedyadu ku dhageen in ay joojiso hannaankii metelaadda shacabka ee hal qof iyo hal cod, iyo curashadii koowaad ee hannaanka xisbiyada badan oo rajadiisu muuqatay. Waxaana Dowladda lagu riixay in ay ka leexato jidkii qummanaa una janjeersato hannaanka doorashada dadban iyo metelaadda kooban.
Markii la isugu tegey Garoowe, Samareeb, Baydhabo iyo Muqdisho si isfahan looga gaaro qabsoomidda doorashada.
Markii uu noqday hal bacaad lagu lisay dhammaan dedaalladii ay sameeyeen dhinacyadii is xilqaamay ee kala ahaa Madaxweynaha Dalka, Ra’iisal Wasaaraha Xukuumadda,
Madaxweynayaasha Maamul Goboleedyada horu-socodka ah, odayaal waxgarad ah, culumada Soomaaliyeed, haweenka daneeya siyaasadda iyo dhab u heshiinta, ganacsatada iyo Saaxiibbada Beesha Caalamka, si ay Madaxda Jubaland iyo Puntland ugu soo qanciyaan in ay oggolaadaan in Dalku doorasho aado.
Xukuumaddu waxa ay maanta u caddayneysaa Umadda Soomaaliyeed in labada Madaxweyne Goboleed ee Puntland iyo Jubaland aysan rabin in dalkaan ay ka dhacdo doorasho uu asaaskeeda yahay heshiiskii 17-kii September iyo is fahankii 16-kii Febraayo. Waana wax laga xumaado in labadaas Madaxweyne ee Puntland iyo Jubaland ay noqdeen jid iyo jiho diid aan doorasho oggolayn
Previous articleWaxaa goor dhawayd saxafada la hadlay Wasiiro ka tirsan Puntland iyo Jubaland oo jawaab kulul siiyay Wasiir Dube
Next articleMaxaa ka jira in muuqaalka Dubbe la duubay xalay Saqdii dhexe?
Qarax Ismiidamin ah oo ka dhacay magaalada Muqdisho
Waxaa goordhaw qarax xoogan oo loo adeegsaday gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay uu ka dhacay Koontaroolka laga ilaaliyo xarunta Madaxtooyada Soomaaliya ee yaala...
Qarax xoogan oo ka dhacay Suuqa Bakaaraha ee magaalada Muqdisho
Farmaajo oo dadaal ugujira in uu baajiyo Shirka Jaraaid ay ciidamada...
Guddoomiyaha degmada Bardaale Maxamed Isaaq oo qeylo dhaan ka muujiyay...
Turkiga iyo Sweden oo ay ka dhexqaraxday Xiisada Diblamaasiyadeed
War kasoo baxay booliska Soomaliya oo looga hadlay Qaraxa Muqdisho ee...